UN-HABITAT | The United Nations Country Team Statement
UN-HABITAT > News > The United Nations Country Team Statement
The United Nations Country Team Statement
(Yangon) The United Nations Country Team in Myanmar expresses profound concern over the events yesterday at the Yadanarbon Shipyard in Mandalay in which security forces used lethal force against demonstrators, reportedly killing two and leaving dozens wounded, some of whom remain in serious condition. The United Nations Country Team in Myanmar extends its thoughts and condolences to the families of the victims and to those injured.
We call on security forces to refrain from violence. The use of excessive force against demonstrators by security forces must stop and the fundamental right to peaceful assembly must be respected along with other human rights such as the freedom of speech.
The United Nations Country Team in Myanmar reiterates the Secretary-General’s call for the “military leadership to respect the will of the people of Myanmar and adhere to democratic norms, with any differences to be resolved through peaceful dialogue. All leaders must act in the greater interest of Myanmar’s democratic reform, engaging in meaningful dialogue, refraining from violence and fully respecting human rights and fundamental freedoms.”
​​မ​နေ့က မန္တလေးမြို့ရှိ ရတနာပုံသ​​​​င်္ဘောကျင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့​သော လုံခြုံ​ရေးတပ်ဖွဲ့များမှ ဆန္ဒပြသူများအပေါ် လူကို​သေ​စေသည်အထိ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းသည့်ဖြစ်စဉ်များမှလူနှစ်​​ယောက်​သေဆုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်းဒါဇင်နှင့်ချီ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ကာ အချို့မှာ ​စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအ​ခြေအ​နေတွင်ရှိ​နေကြောင်း ကြားသိရသည့်အတွက် များစွာ စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိ​ကြောင်း ​မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများက ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ​​သေဆုံးသွားသူများနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများ၏ မိသားစုများနှင့်ထပ်တူ လွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်။
လုံခြုံ​ရေးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုမှ ​​ရှောင်ကြဥ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။ လုံခြုံ​ရေးတပ်ဖွဲ့များက ဆန္ဒပြသူများအပေါ်အင်အားအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုကို ရပ်တန့်ရမည်ဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်စွာ ထုတ်​ဖော်​ပြောဆိုခွင့်အပါအဝင် အခြား​သော လူ့အခွင့်အ​ရေးများနှင့်တကွ အ​​ခြေခံလူ့အခွင့်အ​ရေးဖြစ်​သော ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်/စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ကို အပြည့်အဝ လေးစားလိုက်နာကြရပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်မှ စစ်ဘက်‌ ခေါင်းဆောင်များအား မြန်မာပြည်သူများ၏ ဆန္ဒသဘောထားကို လေးစားရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများကို လေးစား လိုက်နာရန်၊ ကွဲလွဲမှုမှန်သမျှကို ငြိမ်းချမ်းစွာအပြန်အလှန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသော နည်းလမ်းဖြင့် အဖြေရှာရန် တိုက်တွန်းထား​​သည့်အတိုင်း ထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်များအားလုံးသည် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသည့်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊အကြမ်းဖက်မှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများနှင့် အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များကို အပြည့်အဝ လေးစားခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ရှေးရှုဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။